Xiriirka cayaaraha fudud ee Soomaliya oo guddomiye Cusub yeeshay +Sawirro
Tuesday December 15, 2015 - 20:52:58 in Xiriirka Ciyaaraha Fudud by Nocsom Editor
Xiriirka Soomaaliyeed ee cayaraha Fudud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay Shir sanadeedka xiriirkaas, waxaaa kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Wasaaradd a dhalinyarada iyo isboortiga Guddiga Olombikada, madaxda Xiriirada , Madaxda naadi
Xiriirka Soomaaliyeed ee cayaraha Fudud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay Shir sanadeedka xiriirkaas, waxaaa kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Wasaaradd a dhalinyarada iyo isboortiga Guddiga Olombikada, madaxda Xiriirada , Madaxda naadiyada cayaaraha Fudud iyo Marti sharaf kale.
Ugu Horeyn waxaan xafladaWarbixinta waxqabadkan xiriiirka Cyaaraha Fudu ee sanadkan 2015 iyo qorshaha 2016 qaab Docomentary ah usoo bandhigay Xoghayaha Guud ee Xiriirka Maxamed Cabdullaahi Dhaaleey taasoo ay aad ugu riyaaqeeen masuuliyiintii xaflada ku sugnaa .
Agendaha Shirka oo ahaa sidii loo buuxin lahaa booskii uu ka geeriyooday guddoomiyihii hore ee Xirirka Alle Ha unaxariistee Prof: Maxamed Cali Maxamed ayay kooxaha iyo Ururuda Xiriirka cayaaraha Fudud cod gacan taag ah ugu codeyeen Marwo Khadiijo Aadan Daahir in ay noqoto Guddoomiytaha Xiriirka cayaraha Fudud.
Dhanka kale Axmed Gacal Rooboow oo xubin xirirka ahaa ayaa loo doortay guddoomiye ku xigeenka afarad ee xiriirka cayaraha waxaan cod gacan taag ah ugu codeeyay kooxaha iyo ururada xiriirka.
Madaxa Xiriirada Gos Xaaji Maxamed Axmed Coloow , Madaxa Amuuraha Gobolada Gos, IBraahin Xuseen Cali Roombe iyo Agaasimaha Waaxda IsboortigaC/Laahi Aabow Xuseen o o dhaman xafladla ka hdlay ayaa soo dhaweeyay Qabki wacna ay xiriirka cayaraha fudud isu doorteen waxayna kula dardaarmeen in ay u wada istagan horumarinta cayaraah Fudud.
Guddoomiyaha Ladoortay Khadiijo Aadan Daahir ayaa mahad celin balaarin usoo jeedisay dhamaan kooxaha iyo ururada sida aqabayada leh ugu doortay nin ay hogamiso xiriirka Cayaaraha Fudud,
Hogaanka xiriirka cayaaraha fudud ayaa la doortay BishiiJuly 2014, waxuuna hogaana cusub shaqayn donaa inta laga gaarayo dorasha xigta .
W/D:Xuseen Maxamed Hadaafow